Golaha Amaanka oo Nairobi kulan xasaasi ah kula leh DFKMG ah & Maamulada (Xog hoose) – SBC
Golaha Amaanka oo Nairobi kulan xasaasi ah kula leh DFKMG ah & Maamulada (Xog hoose)
Xubno ka socda golaha Amaanka Qaramada Midoobay oo u kuurgalaya xaalada wadanka Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada amaanka, siyaasada & dib u heshiisiinta ayaa maanta shir xasaasi ah kula leh magaalada Nairobi ee caasimada Kenya wafuud Soomaali ah oo ka socda Dawlada federaalka KMG ah, & maamulada Puntland & Galmudug.
Shirkan waxaa ka qayb galaya Madaxweynaha DFKMG ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Ra’isalwasaarihiisa Maxamed Cabdilaahi Farmaayo, Gudoomiyaha Baarlamanka KMG ah Shariif Xasan Sheekh Aadan, Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole, Madaxweynaha Galmudug Maxamed Axmed Caalin & siyaasiyiin kale.
Kulankan ayaa ah laba waji, wajiga koowaad waxay xubnaha golaha amaanka kulan la qaadan doonaan madaxda DFKMG ah ee Soomaaliya sida Madaxweynaha, Gudoomiyaha Baarlamanka & Ra’islawasaaraha, waxaana ujeedkiisu uu yahay sidii loogala hadli lahaa khilaafka u dhaxeeya hay’daha dawlada isla markaana looga gudbi lahaa khilaafkaasi loona qaadan lahaa go’aan la xiriira aayaha dawlada KMG ah oo waqtigeedu uu ku eg yahay bisha August.
Diblumaasi ka tirsan beesha caalamka oo codsade inaan magaciisa saxaafada laga sheegin sababo uu ku sheegay xasaasiyada kulankan leeyahay ayaa u sheegay SBC in kulanka lala yeelanayo madaxda DFKMG uu yahay mid laga doonayo jawaab cad oo la xiriirrta inay meel iska dhigaan khilaafka ay ku dhaqaqaaqan talaabo ay ku mideysan yihiin iyo in talaabo laga qaado.
Arintan ayuu ku macneeyey ina tahay in golaha Amaanka & beesha caalamka ee daneysa arimaha Soomaaliya ay u sheegi doonaan madaxda Dawlada KMG ah in xal siyaasadeed ay ka gaaraan helitaanka nidaam badala dawlada hada jirta ee xiligeedu gabaabsiga yahay.
Kulankan ayaa sidoo kale waxaa laga dhegaysan doona dhinacyada Dawlada KMG ah ee is khilaafsan sida ay arkaan xal iyo in ay soo gudbiyaan qorshahooda siyaasadeed ee la xiriira doorashooyinka madaxda hay’adaha dastuuriga ee dalka iyo waqtiga ku haboon.
Marka la dhageyso talo soo jeedintooda waxaa xubnaha golaha amaanka kulamo la tashi oo kala gooni gooni ah la yeelan doonaan wafuuda kale ee ka socota maamul gobholeedyada dalka sida Puntland & Galmudug kuwaasi oo laga dhageyssan doono aragtidooda xalka arimaha siyaasada iyo helitaanka nidaam badala nidaamka hada jira oo xiligiisu gabaabsiga yahay.
Warka ayaa intaasi ku daraya in marka xubnaha golaha amaanka ka socda ay dhameystaan aarada iyo fikradaha kala duwan ee wafuudda Soomaaliya in ay qaadan doonaan kulan albaabadu u xiran yhihiin kaasi oo laga soo saari doono go’aamo khuseeya xaalada Soomaaliya, iyadoo fulintoodana loo cuskan doono qodobo iyo xeerar caalami ah.
Lama oga sida uu noqon doono go’aankaasi, hase yeehsee diblumaasi Soomaaliyeed oo ka gaabsadey in magaciisa la xuso sababo ku aadan inaan loo ogeyn in uu saxaafada kala hadlo arinkan ayaa sheegay in ay u muuqanayso in golaha Amaanku ay qaadan doonaaan go’aan mudo aan lagu kordhineyn hay’adaha dawlada oo isku mar la qabto doorashooyinka madaxweynaha, Gudoomiyaha Baarlamanka & soo xulida xubnaha baarlamanka oo waliba la dhimi doono tiradooda.
Marka laga hadlayo mowqifyada & aragtiyaha wafuuda shirka ka qayb galaysa waxaa aad isagu aragti dhaw Gudoomiyaha Baarlamanka Shariif Xasan, Madaxweynayaasha Puntland & Galmudug C/raxmaan Faroole & Caalin, taasi oo u muuqanaysa inay shirka culeys hal dhinac u yeesho oo ay najixi waayaan rabitaanka Madaxweynaha DFKMG & Ra’isalwasaarihiisa, balse waxaa laga warsugayaa go’aanka ay qaataan xubnaha golaha Amaanka ka socda.
Ergeyda gaarka ah ee qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Amb. Agustine Mahiga ayaa ku tilmaamay shirkan mid aad uga duwan shirkii horey uga dhacay magaalada Nairobi.